पिलानेसबर्ग पार्क - एक फोटोग्राफिक सफारी र जनावरहरूको पाठ - दक्षिण अफ्रिका - 1aviagem.com
अघिल्लो पोस्ट: हामीले मेक्सिकोको एउटी महिलालाई अन्तर्वार्ता लियौं र मेक्सिकोमा कोरोनाभाइरस सिफारिस र सुझावहरू ल्यायौं
अर्को पोस्ट: Mayans र संसारको अन्त को पूर्वानुमान - मेक्सिको
पोष्ट गरिएको २ महिना अघि 1 टिप्पणी द्वारा रोमोमो लुकाना
नमस्कार साथीहरु, यो पोस्ट सल्लाह र पशु व्यवहारको मिश्रण हुनेछ दक्षिण अफ्रिकाको मेरो पहिलो यात्राको बखत।
Kruger पार्क सल्लाह
धेरै व्यक्ति जो दक्षिण अफ्रिका जाने सोचमा छन्, वा जो पहिले नै त्यहाँ आएका छन्, एक फोटोग्राफिक सफारी (खेल ड्राइभ) गर्ने सोच्दछन्। कुन राम्रो विचार हो। जनावरहरूलाई तिनीहरूको प्राकृतिक वासस्थानमा हेर्दै, जgle्गलको माध्यमबाट दौडँदै, सवानाको ताजा हावा र जनावरहरू बीचको अन्तरक्रिया पर्यटन गतिविधि र रमाइलो छ। अझ राम्रो जब तपाईं ठूलो5(ठूलो पाँच) फेला पार्न सक्नुहुनेछ। हो, यो चुनौती हो किनभने जनावरहरू पिँजाहरूमा बन्द छैनन्, तिनीहरू खुल्ला छन् र फेला पार्न सक्छन् वा फेला पार्न सक्छन्।
त्यसकारण क्रुगर पार्कमा जानको लागि सिफारिशहरू एक दिन भन्दा बढि रहनुहोस्। जे भए पनि त्यहाँ २०,००० किलोमिटर भन्दा बढी वन आरक्षित छ। र पार्क मोजाम्बिकको सीमानामा फैलिएको छ।
यसको मतलब यो छ कि यस प्रकारको भ्रमणको लागि तपाईंलाई पैसा र समय चाहिन्छ। हामी सबै कुरा गरिरह्यौंक्रुगर पार्क। दक्षिण अफ्रिकाको सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा प्रसिद्ध वन्यजीव पार्क।
ब्राजिल छोडेर, प्राय जसो उडानहरू क्रुगर पार्कबाट 400०० किलोमिटर टाढा जोहानसबर्ग शहरमा जान्छन्। तपाईंलाई जबरजस्ती गर्न वा पार्कको भित्र स्थापित साना एयरपोर्टहरूमध्ये एउटामा अर्को उडान गर्न के समाप्त हुन्छ। कसरी: हेन्ड्रिक भ्यान एक; होडस्प्रुट एयरपोर्ट; मलाला एयरपोर्ट; सुकुजा एयरपोर्ट; वा Kruger Mpumalanga एयरपोर्ट।
फाउ, यति धेरै एयरपोर्टहरू छन् कि तपाई अलमल्ल पनि पर्न सक्नुहुन्छ। स्पष्ट रूपमा यदि तपाइँ क्रुगर पार्क सहित एक टूर प्याकेज बेच्ने कम्पनीमा जानुहुन्छ भने, तिनीहरूले सम्भवतः तपाईलाई कुन एयरपोर्टमा पुग्ने सल्लाह दिन्छन्।
अन्य विकल्पहरू केहि थप विलासी होटलहरू, वा यस्तै सेवाहरू प्रदान गर्ने बस कम्पनीहरूले प्रस्ताव गरेको शट्लहरू हुन्।
समस्या यो हो कि त्यसो भए पनि, हामी km०० किलोमिटर टाढा छोटो मार्गमा कुरा गर्दैछौं। यसले सायद "जोहान्सबर्गबाट ​​क्रुगर पार्कसम्म नकब्याक" हटाउछ।
र जब तपाईं अधिक आर्थिक यात्रा गर्नुहुन्छ, समय र पैसाको अभाव हुन्छ। र त्यसोभए कसरी समाधान गर्ने? के म फोटो सफारी बिना नै हुनेछु? (खेल रिजर्व) के म बिग meet लाई भेट्न जाँदैछु?
शान्त, सबै हराएको छैन!
पिलानेसबर्ग पार्क सल्लाह
के हुन्छ यदि मैले तपाईंलाई योहानिसबर्गमा सस्तो र घनिष्ट समाधान भेट्टाए जहाँ १ दिन भित्र गोल यात्रा गर्न सकिन्छ?
हो, म Pilanesberg राष्ट्रीय पार्क को कुरा।
यो जोहानसबर्गबाट ​​करीव २०० किलोमिटर टाढा छ (यो पहिले नै आधा किमी र पनि समय छ)। र सम्भव छ एकै दिनमा आउन र जान पनि। तपाईंले पहिले नै समय र पैसा बचत गर्नुभयो।
यो एक सानो प्रकृति आरक्षित हो, क्रुगर पार्कको तुलनामा धेरै सानो, केवल 550० किलोमिटरको साथ।
जसले एकातिर तपाईंलाई मन पराउँदछ। यदि तपाईंको लक्ष्य ज animals्गलमा जनावरहरू, उनीहरूको प्राकृतिक वासस्थानमा हेर्नुहोस् र सफारीमा बिग find खोज्नको लागि हो भने सानो क्षेत्रले प्रति किलोमिटर बढी जनावरहरूको ध्यान केन्द्रित गर्दछ जुन तिनीहरूलाई पत्ता लगाउन सजिलो बनाउँदछ।
पिलानेसबर्ग जोहानेसबर्गमा थोरै समय बिताउन चाहान्छन्, बिग see लाई हेर्न र १ दिनमा सफारीमा जान चाहन्छन्।
तलको भिडियो तपाईं सफारीमा फेला पार्न सक्नुहुनेको उदाहरण हो।
वास्तवमा पिलानेसबर्ग पार्क एक पूर्ण पार्क हो जसले तपाईंलाई एक अनौंठो अनुभव बाँच्न अनुमति दिन्छ र तपाईंले सोच्नु पर्छ कि यदि तपाईं अझ किफायती र चलिरहेको छ भने।
तर, अवश्य पनि, यदि तपाईंसँग समय छ र क्रुगर पार्कमा जान सक्नुहुन्छ भने यो जानको लागि अझ उत्तम पार्क हो। एक ठूलो पूर्वाधार र अधिक विलासी होटेल वरपर।
तर सबै पछि "ठूला पाँच" को हुन् वा बिग5खेल के हो?
"बिग फाइभ" भन्ने अभिव्यक्ति सिकारीहरूद्वारा बनाईएको थियो र पाँच जना जंगली जनावरहरूलाई जनाइएको थियो जुन पैदल मानवले शिकार गर्नु सबैभन्दा कठिन थियो।
भाग्यवस, शिकार सफारीको इतिहास परिवर्तन भएको छ। सायद किनभने शायद नै कोही खुट्टा मा शिकार हुनेछ। र राइफलहरू क्यामेराले प्रतिस्थापित गर्यो। आज हामीसँग अधिक दिगो पर्यटनको अन्वेषण छ, जुन हतियारको प्रयोग भन्दा सबैका लागि राम्रो छ।
र ठूलो are हुन्:
यो सबैभन्दा ठूलो भूमि स्तनपायी हो। To देखि tons टनसम्म तौल र meters मिटर उचाई र .4..6 देखि .3..5,5 मिटर लम्बाइ नाप्ने। यो एक शक्ति छ कि तपाइँ माथि 6,5 टन गर्न को लागी अनुमति दिन्छ। यसमा दुई हस्तिहाडका टस्कहरू छन् जसले रूखहरू काट्न, रक्षाको लागि र आक्रमणको लागि प्रयोग गर्दछ।
हात्तीहरू बथानहरूमा बस्छन् र मेरो लागि उनीहरूलाई जgle्गाका साँचो राजाहरू मान्नुपर्दछ! उनीहरूलाई अन्य जनावरहरूको सम्मान र उनीहरूको शान्तिम सह-अस्तित्व (विशेष गरी जिराफको साथ) नेतृत्वको राम्रो उदाहरण हो जुन हामी देख्न सक्छौं। थप रूपमा, तिनीहरूले देखाउँछन् कि उनीहरूको महान शक्ति सामान्यतया परिवारका लागि नयाँ वातावरण निर्माण गर्न, खुला मार्गहरू र रूखहरू र चट्टानहरू काटेर पुलहरू निर्माण गर्न प्रयोग गरिन्छ। एक साँचो नेता।
अर्को ठूलो स्तनपायी कि २ देखि tons टन वजन। र to. to देखि meters मिटर लामो छ। यसको नाकमा दुईवटा सीsहरू छन् र दुर्भाग्यवश लोप हुने खतरा छ। यसको प्रजनन ढिलो छ, लगभग दुई बच्चा प्रत्येक दुई बर्षमा। र लगभग तपाइँको सम्पूर्ण शरीर औषधिमा प्रयोग भएको छ।
गैंडा तिनीहरूका जीवन भर धेरै कम यात्रा। यसको खुट्टाहरू रूखको हाँगा जस्तो देखिन्छ। यो चाखलाग्दो छ कि महिलाहरू प्राय: जसो अन्य महिलाहरूसँग मैत्री हुन्छन् र उनीहरूको नाकलाई मित्रताको संकेतको रूपमा खसाल्छन्। अर्कोतर्फ, पुरुषहरू धेरै प्रादेशिक हुन्छन् र मित्रता देखाउनुको सट्टा उनीहरू अर्को पुरुषलाई उनीहरूको इलाकामा धकेल्छन्। त्यसो भए पनि, ती प्रायः जीवन र मृत्युको बिरूद्ध लडदैनन्। वास्तवमा तिनीहरू धकेल्छन् जबसम्म तिनीहरू मध्ये एक थकित हुँदैन र छोडिन्छ। राइनोसले ठाँउ खोज्छन् जहाँ छाया, ताजा पानी र खाना छ। र हामी भन्न सक्दैनौं कि तिनीहरू गलत थिए, हैन ?!
- भैंस: 3०० देखि kg०० किलोग्राम तौल र मानव को उचाई १.500 देखि १.600० मिटर छ। यसको सीs र निधार एकदमै कठोर छ।
भैंसाहरूले हामीलाई अभिव्यक्तिको टाउको टुप्पोको वास्तविक अर्थ सिकाउँदछ! तिनीहरू प्राय: समूहको पदानुक्रमका लागि स fight्घर्ष गर्दछन्। र ती मध्ये एकले प्रक्रियामा मर्न वा नछोडेसम्म उनीहरूले आफ्नो टाउको पिटिरहन्छन्। त्यसोभए हामीले सिकेका छौं कि कडा भएर कडा भएर बस्नु राम्रो नहुन सक्छ। र यो पदानुक्रमको लागि लड्न लायक छैन, यसले मात्र ठूलो टाउको दुखाइ दिन्छ! नेतृत्व स्वाभाविक रूपमा आउन दिनुहोस्।
जनावरहरूको राजा भनिन्छ! १ 150० देखि २ kg० केजी तौल र उचाई १.२० सम्म। किन उनले यो उपाधि बोक्छन् भन्ने बारे निश्चितता छैन। कतिले विश्वास गर्छन् कि यो उसको सामर्थ्यको कारणले हो, अरूहरू कारण कि ऊ आफूलाई ताज जस्तो देखिन्छ। अरूलाई तिनीहरूको भव्यताका लागि। र अझै अरूहरू किनभने उनी पहिले म्यान-ईटर भनेर चिनिन्थे। सत्य यो हो कि पछि सम्म प्रस्तुत अघिल्लो जनावरहरू भन्दा, सिंहले वास्तवमा मानवहरूलाई खायो। तर त्यो किनभने उहाँ मांसाहारी हुनुहुन्छ, र सम्भवतः अरू "स्वादिष्ट" विकल्पहरू बिना छोडिनेछ, र यो होइन कि उहाँ स्वभाववादी र हर समय बहादुर हुनुहुन्छ।
सत्य यो हो कि सिंह धेरै चापलु छ र धेरै हल्ला नगरी सर्छ, त्यसैले यो सूचीमा अघिल्लो जनावरहरूको शिकार गर्न अझ गाह्रो थियो, दोस्रो ठूलो बिरालो बाहेक, बाघको आकारमा मात्र गुमायो।
हामी भिडियोमा देख्न सक्छौं, राजाहरूसमेत तिनीहरूको अल्छी र फुर्सदको क्षणहरू छन्। वास्तवमा, सिंहहरूको रातको बानी हुन्छ र दिन यस्तो तनावमा बित्दछ! के तपाईंलाई थाहा छ जब तपाईं उठ्नुहुन्छ र कफि समाप्त हुनुभयो? हो यो दिन को समयमा सिंह हो! र जनावरहरूका राजाको पाठहरू बीचमा हामी यो तथ्यलाई हटाउन सक्छौं कि उनीहरूलाई अरू जनावरहरूले खतरा महसुस गर्दैनन् र आफू वरपरका मानिसहरूलाई धेरै चिन्ता गर्दैनन्। जे भएतापनि, एक राजा मात्र साहसी र सामर्थ्यको साथ जीवन बिताउँदैन, तर आफूलाई कसरी थोपर्ने र कसरी लुक्ने भनेर जान्ने पनि। अवश्य पनि, यदि तपाईं सिंहको उपस्थितिमा हुनुहुन्छ भने, हिचकिचाउनु र सजिलो शिकारजस्तो नहुनु उत्तम हुन्छ, अन्यथा, तपाईंलाई यो थाहा छ, सही छ ?! खाजा सँधै राम्रोसँग जान्छ।
To० देखि 40 ० किलोग्राम बीचको तौल र ०. under ० सेन्टीमिटर। खुट्टा मुनि वा १.90० सेन्टीमिटर मापन गरी यदि ऊ बस्दछ भने यो सूचिमा सबैभन्दा सानो जनावर हो।
यो एक कसरी लुक्ने जान्दछु, मैले रिजर्व खेलको क्रममा कुनै पनि फेला पारेन। यो फोटो बिबेक उप्पलको हो। चितुवा धेरै ब्राजिलमा रहेको जग्वार जस्तै देखिन्छ। हुनसक्छ तिनीहरू आफन्त हुन्, म निश्चित छु।
र यो सायद चितुवाको उत्तम पाठ हो, यदि तपाईं लुकाउन सक्ने कोहीले फेला पार्न चाहनुहुन्न भने।
र यी ठूला were जनालाई मानौं सब भन्दा गाह्रो जनावरहरू मानिन्छ "खुट्टामा"। तिनीहरू सबै जंगली छन् र सजिलैसँग मानवलाई मार्दछन्। Largest ठूला शाकाहारीहरू हुन्, र उनीहरूले खतरा महसुस गरेको खण्डमा मात्र आक्रमण गर्दछन्। अन्य २ मांसाहारीहरू हुन्। दुर्भाग्यवस आज ती सबै मानिसद्वारा विलुप्त हुने खतरामा छन्। सबै पछि, हामी अब पुरानो बाटोको खोजी गर्दैनौं। हामी धेरै अधिक उन्नत टेक्नोलोजीहरू प्रयोग गर्दछौं, जस्तै कार, फायरआर्म्स, जाल, सम्भवतः बिजुली बोल्ट वा लाइटसाबरहरू?
ठिक छ, अब तपाईलाई पहिले नै थाहा छ ठुलो are को हुन्। अर्को अवसरमा म अन्य जनावरहरू जस्तै हिप्पोस, जेब्रा र जिराफको बारेमा कुरा गर्छु!
यदि तपाईंलाई यो मनपर्‍यो भने, यस ब्लगलाई छेउमा रातो बटनमा सदस्यता लिनुहोस्। वा तलको विश्वमा क्लिक गरेर थप पढ्नुहोस्।
मार्च 21 देखि 2020 सम्म 11: 18
कस्तो अद्भुत! उत्कृष्ट सामग्री!